I-China Venetian Blinds Exporters kanye neNkampani | I-ETEX
Sivelisa ama-venetians blinds ahlukahlukene. Uhlobo:
● Izimpumputhe zaseWood Venetians, izimpumputhe zeM bamboo Venetian
● Ama-PVC Faux Wood Blinds Blinds
● Izimpumputhe ze-Aluminium Venetian
Kunezinhlobo ezahlukene zezinhlelo ezilungele ukusetshenziswa kwezimpumputhe ze-venetian:
● Uhlelo lweCord
● Uhlelo lweChain
● Uhlelo Lwezimoto
Izimpumputhe zaseVenetian, kwesinye isikhathi ezaziwa ngokuthi ama-slat blinds noma ama-blind ovundlile, zenza enye indlela enhle yamakhethini futhi zingakha ukubukeka okuhle nokunesimanje ngaphakathi kwekhaya lakho. Sinezinhlobonhlobo ezinhle zezimpumputhe ze-venetian zokhuni, izimpumputhe ze-aluminium venetian, nama-faux izinkuni ezingalethi ukujula nokufudumala kuphela kokuhlobisa kwakho, kepha zikusize ukuba uthathe izintambo zokukhanya nobumfihlo kalula. Izimpumputhe ezimhlophe ze-venetian zokhuni ezinye zezimpumputhe eziguquguqukayo ongazithenga, zisebenza kahle nganoma yisiphi isikimu sombala noma isitayela sokuhlobisa. Izimpumputhe ze-venetian ezimnyama zivame ukusebenza kahle ngokulinganayo yonke indawo nalapho. Ukuze ubuke futhi uzizwe njenganamuhla, hlola uhla lwethu lwamabala e-aluminium venetian. Izinto eziqinile ngeke zikhothame noma ukugqwala, zenze lokhu kungaboni kahle ukusetshenziswa kwekhishini nokugeza. Uma ungathanda ukubukeka kwama-blind slat blinds, kepha udinga okuthile okunzima okugqokile noma okungabizi kakhulu, hlola uhla lwethu lwe-faux blind venetian blinds. Bangabantu abahamba phambili emhlabeni womabili!
Noma ngabe ufuna amathoni angathathi hlangothi njengamakhethini amhlophe okhuni noma i-grey venetian ukuze ivumelane nokuhlobisa okuguquliwe, noma ufuna ukwenza isitatimende esikhanyayo ngezimpumputhe zewindows lokhuni, uqinisekile ukuthola umdlalo wakho ofanele eDunelm.
Izimpumputhe zethu ezenziwe nge-venetian ezenziwe ngomumo zitholakala ngobukhulu obuningi ukulingana nezinhlobo ezahlukahlukene zamawindows futhi kulula ukuzifaka, Kodwa-ke, uma unamafasitela osayizi abangajwayelekile, noma umane nje ufuna ezinye izimpumputhe ze-venetian ezifanelekileyo ezakhelwe isitayela sakho esiqondile
Ukusetshenziswa kweVenetian Blinds ngokuphelele futhi kufanelekile ehhotela, umhlobiso wasekhaya, ikhefi, ihhovisi, izitolo, amafulethi nezindawo zokwakha.
Esedlule: Izindwangu ezingaboni eziqondile
Olandelayo: I-Readymade Vertical Blind